I-BWA011-DS023-LT-10PD-Iscreen sokuchukumisa iNkqubo yokuLawulwa koBungqina beDijithali ye-Port-Solutions ze-OMG
I-BWA011-DS023-LT-10PD-Iscreen sokuchukumisa iNkqubo yokuLawulwa kobungqina beDijithali ye-Port
Isoftware yoLawulo lweNkqubo yoBungqina
Imeko yokukhuphela ebonakalayo: Isitishi sokumisa sibonisa imeko yokukhuphela idatha, inani leefayile ezikhutshelweyo, kunye nexesha eliqikelelweyo lokukhuphela kwikhamera nganye enxibe umzimba.
Ukucocwa kwedatha yekhamera: Isikhululo sokumisa ngokuzenzekelayo sicoca yonke idatha erekhodiweyo kwi-BWC edityanisiweyo emva kokuba yonke idatha ikhutshelwe kwifowuni.
Qalisa kwakhona ukukhuphela: Ukuba ukhuphelo oluvela kwi-BWC ukuya kwisikhululo sokumisa luphazanyiswa, isikhululo sokumisa siza kuphinda sikhuphele apho sasigqibele khona xa ikhamera yayiqhagamshelwa.
Isango: Inkqubo isebenzisa i-Browser / Server yoyilo ukuhlangabezana neemfuno zeearhente ezizodwa. Yonke idatha ekhutshelweyo iyafikeleleka ukusuka kwisikhululo sokumisa okanye indawo yenethiwekhi yendawo yi-Web Browser.
Abasebenzisi & Amaqela: Umsebenzisi ngamnye wabelwe iimvume zesiko ukufikelela, ukujonga, ukukhuphela, ukunika ingxelo, kunye nokucima idatha efakiweyo.
Ulwazi lwamatyala: Abasebenzi abagunyazisiweyo banokongeza iinkcukacha zamatyala abalulekileyo, bafake amaxwebhu ongezelelweyo kunye nezinye iifayile ezinxulumene netyala elinedatha ebhaliweyo.
Iindidi zezehlo zesiko: Iziganeko zezehlo zesiko zongezwa kwinkqubo ukuhlangabezana nemithetho kunye nemigaqo-nkqubo eyahlukileyo yearhente.
Ukumakishwa kwevidiyo: Idatha ekhutshelweyo inokumakwa.
Idatha evaliweyo: Idatha ekhutshelweyo ebuthathaka inokutshixwa ukugcina abasebenzisi abangagunyaziswanga ukufikelela, umnini wedatha ubandakanyiwe.
Idatha ekhuselweyo: Idatha ebalulekileyo inokukhuselwa ekususeni ngokuzenzekelayo okanye ngesandla.
Ukhangelo olunzulu: Khangela ngokulula idatha erekhodiweyo oyifunayo usebenzisa iparameter enye okanye yenkitha yokukhangela.
Iingxelo zamanani: Abasebenzisi abagunyazisiweyo banokufumana kwakhona ukuphindaphindeka kwedatha yesiganeko sedatha yomhla ochaziweyo.
Umkhondo ogqityiweyo woPhicotho-zincwadi: Ukulandelela isenzo ngasinye esenziwe ngamagosa kunye nabasebenzisi kwisikhululo sokumisa okanye kwiWebhu Portal.
Ugcino lwedatha: Idatha ekhutshelweyo inokuxhaswa kwiiseva zeefayile ezichaziweyo ngenethiwekhi (NAS). Ulawulo lungenza imigaqo-nkqubo yesiqhelo yenkqubo yokugcina kuphela idatha ebalulekileyo kwi-NAS okanye uninzi lweeseva zokugcina.
Ukujonga inkqubo yeXesha leXesha: Ulwazi malunga nenqanaba lesikhululo sokumisa kubandakanya indawo yokugcina yangaphakathi, inqanaba lediski, imeko ekwi-intanethi kunye nempilo yedatha ibekwe esweni ngexesha-lokwenyani.
Ungqamaniso lwexesha: Isitishi sokumisa sihlaziya ngokuzenzekelayo ixesha leKhamera yeWorn Worn xa izixhobo zixhunyiwe.
Ugcino lwasekhaya olunokuhlaziywa: Lawula ngokulula kwaye ugcine idatha ekuhlaleni kwaye uphelise iifizi zenyanga zokugcina. Ukugcinwa kwenkqubo kunokwandiswa ngaphakathi nangaphandle.
Inkqubo yeSoftware Inkqubo yokwenza Ukuphumelela kwe10
Ukufunyanwa kweSoftware Ukunyanzeliswa koMthetho weNkqubo yoLawulo loBungqina
Isimo seHardware Bonisa iinxalenye I-LCD ye-10.1-intshi, isisombululo somzimba 1280 x 800
Chukumisa iiNxalenye Amanqaku ama-capacitive touch screen
Chipset Main Dual-core CPU Intel chipset kunye nenketho yezinye iiprosesa zoSapho ze-Intel
Ikhono lokukhumbula I-4G DDR 1600/1333/1066 MHz (ngokuzikhethela i-8 ukuya kwi-16G).
Inkqubo eNzima yeDrive I-60G SSD
Ukugcina amandla 1T, 2,4T, 8T, 12T, 16T yokugcina amandla.
Ujongano lokuFumana I-Mini / iMicro / uhlobo lwe-C-USB iza ngomgangatho nge-8 (ngokuzithandela 10)
Faka iiNqaku Ulawulo lokufumana Ulawulo olubophelelayo lokubhalisa
Ixhasa ukuhanjiswa okungagungqiyo kwenkqubo yokufumana
Inkqubela phambili yokufumana kunye nenqanaba lokutshaja ziboniswa ngamandla
Isixhobo sokufumana sihambelana nendawo yokubonisa yesikrini nganye nganye
Inani lezixhobo eziqokelelwe ngokuzenzekelayo kwaye ngaxeshanye zingenziwa ngokwezifiso
Imithetho yokuqinisekisa ehambelana nomgangatho ophakathi wokhuseleko loluntu
UkuCwangciswa kwedatha Ifayile yevidiyo ayinalo uxinzelelo lomfanekiso wokuqala
Udidi oluzenzekelayo (kuxhomekeke kuhlobo lwefayile, isisombululo okanye umhla)
Ukulayisha ngokuzenzekelayo kumncedisi ochaziweyo
Ngenisa ukulungelelaniswa komgaqo-nkqubo (ixesha, idilesi yendawo ekuya kuyo, uhlobo lwefayile, ubungakanani bebhendi yenethiwekhi, njl.
Xa irekhodi litshekishwa ngokuzenzekelayo, inqanaba lokugqitywa kokufunyanwa liqinisekiswa ngokuzenzekelayo kwaye idatha ikhutshelwa ngokuzenzekelayo
Ulawulo loGcino Ulawulo lomgaqo-nkqubo wokugcina (indlela yokugcina, uhlobo lwefayile yokugcina, indlela yoxinzelelo, njl.
Ulawulo lwendawo yokugcina (ukucoca, isilumkiso kwangethuba, ulwandiso, ukhuphelo, njl.
Isimo sokugcina siyaboniswa
Isiseko sedatha sixhaswa rhoqo
Ukuhanjiswa kobungqina obuhanjisiweyo, umbono
Ukhuseleko Lwadatha Abasebenzisi abangagunyaziswanga abanamalungelo okusebenza kwedatha
Ungqamaniso lweDatha Iindlela ezimbini zokungqamanisa kwindawo yedatha + indlela yokusebenza kunye nokusebenzisana kunye neqonga lolawulo
Ulawulo lwamalungelo Imvume engenamda yokulandelana ilawulwa kwakhona
Unxibelelwano lwangaphakathi I-Inline izixhobo zokuthumela imiyalezo ngokukhawuleza
Uphando lobungqina Ubungqina obubalulekileyo buyadluliselwa ekwabelaneni ngesigwebo
Uvavanyo lomsebenzi Uvavanyo lwabasebenzi, uvavanyo lweyunithi
Ulawulo lweSiza Ulawulo lwamaziko amanqanaba okusebenzela
Management Log Ukuloga kwamanyathelo
Ujongano loMamkeli Tshintshela amaqhosha oMatshini Izitshixo zomzimba
UNxibelelwano lweNethiwekhi RJ45x1
Isinxibelelanisi seDatha I-USB-Umama
Properties Properties amandla I-ACIN: 100 ukuya kwi-240V; I-50 ukuya kwi-60Hz ngaphezulu kokukhuselwa koxinzelelo, ukhuseleko ngaphezulu, ukhuseleko lwamandla ngaphezulu, ukhuselo lwexeshana
ngamaqondo yokusebenza -20to60 degrees Celsius
Ukusebenza komswakama <90% yexesha
ubungakanani X x 48 34 10 cm
Ubunzima bomnatha weMveliso Malunga ne9kg
Imveliso Ngaba Gross Ubunzima Malunga ne-10kg (ukupakisha ibhokisi).
quality Assurance Izinto zeShell Zonke izindlu zentsimbi, anti-static, anti-magnetic, anti-strong field field ukuphazamiseka
Isiqinisekiso esisinyanzelo Ukuqinisekiswa okunyanzelekileyo kweemveliso zombane e-China (3C).
Imigangatho yokusiNgqongileyo Onke amacandelo kunye nezixhobo zokupakisha ziyahambelana nemigangatho yendalo esingqongileyo
424 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje